सरकारको क्षमता छैन : प्रधानमन्त्री ओली – Sudarshan Khabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले कोभिड–१९ को समस्याका बेला सरकारको सहयोग परिमाणमा नभएर क्षमता र दक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समस्यामा परेका निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि सरकारको क्षमता हेर्नुपर्ने बताए ।
‘उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले किन सपोर्ट गर्न सकेन ? पैसा किन दिन सकेन ? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर हामीले गछेअनुसार सहयोग गर्ने हो । हामीसँग सेभिङ्ग कति र योग्यता क्षमता कति छ त्यो हेर्नुपर्छ । हामीसँग प्रयाप्त स्रोतहरु छैनन्, त्यसैले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न सकेनौं । तर जेजति छ, त्यसबाट सरकारले सकेको सहयोग गरेको छ । यसबाट सन्तुष्टि मान्नुस् । हामी भन्दा ठूलठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुसमेत कोभिडका कारण खस्केका छन् । ठूलो आर्थिक सामाजिकसहित मानवीय क्षति समेत व्यहोरेका छन् । भलै तुलनात्मक रुपमा हामीले कम क्षति व्यहोरेका छौं । यो मानेमा कोभिड १९ नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनिकरणमा सरकार सफल छ । समयमै हामीले कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा नलागेका भए नसोचेको परिणाम व्यहोर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तै अवस्था आएन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।